MRTပေါ်က ထိုင်းမလေးကြေညာတဲ့အတိုင်း ရထားပေါ်မှာ မျက်နှာပြောင်ပြီး လိုက်ပြောနေတဲ့ Joker – Cele Gabar
MRTပေါ်က ထိုင်းမလေးကြေညာတဲ့အတိုင်း ရထားပေါ်မှာ မျက်နှာပြောင်ပြီး လိုက်ပြောနေတဲ့ Joker
ဟာသတွေ အခွီတလိုင်းလေးတွေလုပ်ရင်း ပရိသတ်တွေကို ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ဖန်းတီးပေးနိုင်တဲ့ ဟာသ သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် Jokerကိုမသိတဲ့သူမရှိပါဘူးနော်။ သူမတူအောင်ပြောင်မြောက်တဲ့ ဟာသလေးတွေနဲ့ ချစ်ရတဲ့ပရိတ်သတ်တွေကို အူတက်ရယ်မောစေနိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဂျိုကြီးဆိုပြီးတော့ တောင် ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်တာခံနေရသူပါပဲနော်။
အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ပရိသတ်တွေပေးတဲ့နေရာတစ်နေရာကို ခိုင်ခိုင်မာမာရရှိထားပြီးတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပေါင်းများစွာမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲ။ လက်တလောမှာတော့ သူဟာ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုရောက်ရှိလို့နေခဲ့ပါတယ်နော်။
ရဲလေးတို့နဲ့အတူ ဘန်ကောက်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ အလုပ်ကိစ္စတွေလည်းလုပ် လည်ပတ်ရင်း အရမ်းပဲပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတဲ့နော်။ ရောက်တဲ့နေရာတိုင်း ဟာသလုပ်လိုက်ရမှာကျေနပ်တဲ့ ဂျိုကာဟာ အခုလည်း ပရိသတ်တွေကို အခွီတလိုင်းဗီဒီယိုလေးနဲ့ ရယ်မောစေခဲ့ပြန်ပါပြီနော်။ MRT ထဲက ထိုင်းမလေး ကြေညာတဲ့အတိုင်း တစ်သွေမတိမ်းလိုက်ဝါးချကာ ပြောရင်းမျက်နှာပြောင်ထားတဲ့ အခွီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို လူမှုစာမျက်နှာပေါ်မှာတင်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ကဲ…. ဒီတစ်ခါ ဂျိုကာတစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေခွီရအောင် လုပ်ထားသေးဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
Source:Wai Yan Tun Min
MRTပျေါက ထိုငျးမလေးကွညောတဲ့အတိုငျး ရထားပျေါမှာ မကျြနှာပွောငျပွီး လိုကျပွောနတေဲ့ Joker
ဟာသတှေ အခှီတလိုငျးလေးတှလေုပျရငျး ပရိသတျတှကေို ပြျောရှငျမှုတှကေို ဖနျးတီးပေးနိုငျတဲ့ ဟာသ သရုပျဆောငျ အဆိုတျော Jokerကိုမသိတဲ့သူမရှိပါဘူးနျော။ သူမတူအောငျပွောငျမွောကျတဲ့ ဟာသလေးတှနေဲ့ ခဈြရတဲ့ပရိတျသတျတှကေို အူတကျရယျမောစနေိုငျသူတဈယောကျဖွဈတဲ့အတှကျ ဂြိုကွီးဆိုပွီးတော့ တောငျ ခဈြစနိုးနဲ့ချေါတာခံနရေသူပါပဲနျော။
အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါမှာ ပရိသတျတှပေေးတဲ့နရောတဈနရောကို ခိုငျခိုငျမာမာရရှိထားပွီးတော့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးပေါငျးမြားစှာမှာလညျး ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့သူတဈယောကျပါပဲ။ လကျတလောမှာတော့ သူဟာ ထိုငျးနိုငျငံဘနျကောကျမွို့ကိုရောကျရှိလို့နခေဲ့ပါတယျနျော။
ရဲလေးတို့နဲ့အတူ ဘနျကောကျကိုရောကျရှိနခေဲ့တာလညျးဖွဈပွီးတော့ အလုပျကိစ်စတှလေညျးလုပျ လညျပတျရငျး အရမျးပဲပြျောရှငျနခေဲ့ပါတဲ့နျော။ ရောကျတဲ့နရောတိုငျး ဟာသလုပျလိုကျရမှာကနြေပျတဲ့ ဂြိုကာဟာ အခုလညျး ပရိသတျတှကေို အခှီတလိုငျးဗီဒီယိုလေးနဲ့ ရယျမောစခေဲ့ပွနျပါပွီနျော။ MRT ထဲက ထိုငျးမလေး ကွညောတဲ့အတိုငျး တဈသှမေတိမျးလိုကျဝါးခကြာ ပွောရငျးမကျြနှာပွောငျထားတဲ့ အခှီဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို လူမှုစာမကျြနှာပျေါမှာတငျထားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော။ ကဲ…. ဒီတဈခါ ဂြိုကာတဈယောကျ ဘယျလိုတှခှေီရအောငျ လုပျထားသေးဆိုတာကွညျ့လိုကျရအောငျနျော။
အပြင်မှာ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲနဲ့ ကိုရီးယား ဒရမ်မာတွေမှာသာ မြင်တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ အပြုအမူများ
“အမြဲမျက်နှာမငယ်ရအောင် ထားပေးတဲ့ Chilliesတွေကို private screening ပွဲလေးလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး”
“သားငယ်ငယ်က ပုံလေးနဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ဖေဖေအောင်ရင်”